Semalt: Is Botnet Inonyanya Kuita Cyberweapon Here?
Botnets ikozvino inofungidzirwa sezvombo zvepamusoro-shandiswa zve-cyber mune zvinyorwa zvemakambani ekudhinda. Botnets inotora huwandu hwevashandi vekushandisa kombiyuta uye ruzivo rwekuwanika pasina ruzivo rwevadzidzisi uye ruzivo. Jason Adler, we Semalt Mutengi Wakabudirira Muchengeti, anotsanangura kuti zvombo izvi zvekushandisa zvinogona kukanganisa makombiyuta, makadhinda kana zvinyorwa.
Zvaunoda kuziva nezvesipi
Botnets inyanzvi yemagadheti anorayirwa nemarware kuti apinde muwebsite uye zvigadziri zvinyararire - quartz water bottle buy. Bhokete rinotungamirirwa nevatevedzeri vebhodhi, mabhakitiriri anokonzera mabhoti asingatyi kupinda mumakombiyuta. Bot-vafudzi vanoshanda nekubatsirwa nemiravha yemirairo inovabatsira kuti vateerere masangano.
Kazhinji, vanoshandiswa kuba uye kuwana ruzivo rwemari uye mapepa. A kugoverwa kunoramba-kwe-kushanda kune imwe shanduro yemabhenetsiti, uko mabote anotungamirirwa kuti ave netsike yemigwagwa kana kutumira zvikumbiro zvinyengeri pane imwe nzvimbo yewebhu. Mukufamba kwenguva, nzvimbo yakatarwa inoguma ichinyanyiswa, mamiriro ezvinhu anovamanikidza kuti vavhare. Munguva pfupi yapfuura, makombiyuta erobhoti ave achishandiswa zvakanyanya kubira mari pamabasa ekurumbidza.
Kuwedzera kwe robot network
Kukura uye kuwedzerwa kweInternet yezvinhu zvakabatsira zvikuru pakuwedzera kwemabhodeni. Indaneti yezvinhu (IoT) zvishandiso zvinogona kushandiswa nyore nyore uye kurwiswa nehombani kana zvichienzaniswa nemakombiyuta. Shodan, injini yezviyero zveIoT, inowanzoshandiswa nevanotengesa bhodzi kuti vaone uye vaone zvigadziriswa zvishandiso uye magadhi paIndaneti.
Vagadziri vanogadzira botnet havasi kushandisa chete robot mitambo nokuda kwekuwana mari asi vanovashandisa kune vamwe vanovhiringidza. Vanokunda vanoshandisa zvakanaka mabhota ekuba uye nekuwana ruzivo rwakakosha kune mawebsite. Bredolab botnet muenzaniso we robot network yakabhadharwa kune vanosekwa. Mukudzoka, vanorwisa vakaguma vachibhadhara musikoni wacho mari inofungidzirwa ye $ 120 000 pamwedzi.
Mirai yaiva imwe yakarambidzwa kushorwa-kwe-kushungurudzwa kwakasangana nehutachiona. Vagadziri vakagadzira botnet vakapa chirongwa che cyber chekubhadhara muhomwe ye $ 7,500 paawa.
Mazano ekuti ungadzivirira sei PC yako kubva kumabhenetsiti
Botnets inofungidzirwa kuti inotyisa sezvo kurwisa kunotanga kushanda pasina chiziviso chevashandisi vepakombiyuta. Mushure mekunge uchitorwa mukana we, kombiyuta yako inoratidzira spike mumugwagwa uye zvishoma nezvishoma kushanda. Heano matanho ekudzivirira nzira yako kubva pakuchengetedzwa neBetnet network.
Chengeta zvinhu zvisingakoshi kubva pakushanda pamakombiyuta yako. Vanotsvaga vanoshandisa zvishandiso kuburikidza nezvinhu zvakasununguka uye zvikepe.
Gara uchigadzirisa hardware uye software zviri pafoni yako. Kuchengeta mapurogiramu ako ne software zvinovandudzwa kunobatsira kuona nekuvhara mafaira asina kunaka uye bots kubva pakuwana kombiyuta yako.
Shandisa mapepaji epasimba akasimba uye shandura kombiyuta yako zvisingagadziriswa kuti urege kugadziriswa. Zvinonyadzisira nevanoshungurudza vanoona zvishoma zvinyorwa zvinyorwa uye zvigadzirwa zvemafekitari kuti zviwanikidze foni yako.
Mukushambadzira kwemazuva ano, mabhota anoonekwa seanonyanya kushandiswa kwekunyorwa kwepaIndaneti. Musarega mabhota akanganisa kuparidzira kwako paIndaneti. Ramba wakangwarira nokushandisa mazano anotevera.